Ndi Social Media Nwere Ike Depda Mbibi? | Martech Zone
Akara Earl's akwụkwọ, Atụrụ, abụrụwo ihe siri ike maka m. Ejila ụzọ ahụ ezighi ezi. Ọ bụ akwụkwọ dị ịtụnanya achọtara m site na blọgụ Hugh McLeod.
Ana m ekwu 'ihe siri ike' n'ihi na ọ bụghị ele ụkwụ 10,000. Ìgwè (Otu esi agbanwe akparamàgwà mmadụ site na iji ezigbo ọdịdị anyị) bụ akwụkwọ siri ike nke na-akọwapụta ọtụtụ ihe ọmụmụ na data iji wee nweta isi okwu ya. Nakwa, Mark Earls abụghị onye ode akwụkwọ akwụkwọ azụmaahịa gị - ịgụ akwụkwọ ya na-eme m ka ọ dị m ka m na-agụ akwụkwọ na-apụ na ọgbakọ m (ọ bụ n'ezie!). Ọ bụrụ na ị bụ ọgụgụ isi ma nwee ekele miri emi, miri emi na njirisi njirisi - nke a bụ akwụkwọ gị.
Ọ bụrụ na ị na-eme ya dika m, ọ bụ nnukwu akwụkwọ. Enwere m ike ibelata ụfọdụ ọgaranya site na ịde banyere ya ebe a, mana kedụ ebe ọ bụ! Ana m aga maka ya.
Otu isiokwu Mak kwuru banyere ya bụ ịda mbà n’obi. Mark kwuru banyere ihe abụọ na-akpatakarị ịda mba - mmekọrịta nke nne na nna na nwa ha na mmekọrịta mmadụ na ndị ọzọ. Enweghị m ike ijide onwe m ma ọ bụrụ na Social Media abụghị usoro kachasị mma Prozac maka ịgwọ ọrịa mmekọrịta mmadụ na ibe ya dịka ịda mba. Mgbasa mgbasa ozi na-eweta nkwa nke ijikọ ndị ọzọ na-abụghị nke gburugburu mpaghara gị n'ụlọ, ụlọ ọrụ, ma ọ bụ ọbụlagodi agbata obi gị.
Twitter, WordPress, Facebook, Kpọkọtanụ, Egwuregwu… niile nke ngwa ndị a abụghị naanị 'Web 2.0', ha bụ ụzọ isi na-agwa ibe ha okwu. Ka a sịkwa ihe mere eji eme ngwa ọha na eze. Ọ bụghị ya dị mfe karị imeghe ndị mmadụ na nchekwa nke ịntanetị n’etiti anyị?
Na ogbako onwa ole na ole gara aga, echetere m otu nwanyi onye juru si:
Kedu ndị bụ ndị a na kedu ka ha si dị n'ịntanetị oge niile nke ụbọchị? Ọ bụ na ha enweghị ndụ?
Ọ bụ echiche na-adọrọ mmasị!, Ọ bụghị ya? Echere m na maka ọtụtụ ndị, nke a is ndụ ha. Nke a bụ njikọ ha na ndị ọzọ, ihe omume ntụrụndụ ha, ọdịmma ha, ndị enyi ha na nkwado ha. N’oge gara aga, onye ‘nọ naanị ya’ kwesịrị ibi naanị ya. Mana taa, 'onye nkpuru' ekwesighi! Ọ / ya nwere ike ịchọta ndị ọzọ nwere otu ihe omume ntụrụndụ ahụ!
Mightfọdụ nwere ike ịrụ ụka na ụdị netwọkụ 'mmekọrịta' a yana netwọkụ nchekwa yana anaghị adị mma dịka ezigbo mmekọrịta na mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Ha nwere ike ịbụ eziokwu… mana ejighi m n'aka na ndị mmadụ na-emeso nke a dịka ihe ọzọ. Maka ọtụtụ mmadụ, nke a is nanị ụzọ ha si agwa mmadụ okwu.
N’ụlọ akwụkwọ sekọndrị enyi m, Mark, bụ omenkà dị ịtụnanya. Ọ bụ nnukwu anụ ọhịa nke otu nwoke. O nwere afụ ọnụ zuru oke na ọkwa 10 ma dee akwụkwọ na-atọ ọchị na akụkọ nke Vampires na Werewolves. M hụrụ n'anya na-amị na Mark ma m nwere ike mgbe niile na-agwa na ọ bụ erughị ala gburugburu onye ọ bụla - ọbụna m. Echeghị m na ọ dara mbà ma ọlị, mana ọ dị jụụ belụsọ maka mkpọtụ oge ụfọdụ (M na-etighachi azụ).
Enwere m ike n'eziokwu were Mak bụrụ onye ama ama ama ama ama ama ama, ma ọ bụ ike bi n'ọzara n'onwe ya taa. Enweghị m ike ijide onwe m, n'agbanyeghị. A sị na Mark nwere blọọgụ na ntaneti iji bipụta akụkọ ịtụnanya ya, echere m na ọ gaara ejikọ ọtụtụ puku ndị ọzọ nwere otu mmasị ahụ. Ọ gaara enwe netwọkụ mmekọrịta - otu ndị enyi na ndị enyi gbara ya ume ma nwee ekele.
Anaghị m eche na anyị na-ede blọgụ na-agbanahụ ịda mbà n'obi ma ọ bụ owu ọmụma site na ederede anyị. Anyị na-eme; Otú ọ dị, na-asọpụrụ ndị na-agụ akwụkwọ anyị nkwanye ùgwù dị ukwuu. Adịghị m iche. Ọ bụrụ na m hụ onye na-abanye na blogger ọzọ bụ enyi m, m ga-awaba ma chebe ya. Ọ bụrụ na m nụrụ banyere onye na-ede blọgụ na-arịa ọrịa, ana m ekpe ekpere maka ya na ezinụlọ ya. Ma mgbe onye na - ede blọgụ na - akwụsị ịde blọgụ, ọ na - ewute m na ịnụrụ ha.
Rụ ọrụ iri ise rue iri isii n’izu anyị na ịbụ nna naanị ya, enweghị m ọtụtụ “Ndụ” (dika nwanyi m kwuru banyere ya siri puta) n'azu blog na oru m. N'ụzọ na-emegide onwe m, agbanyeghị ndụ ntanetị na-akwado nkwado, na-enwe obi ụtọ ma na-ekwe nkwa. Enwere m ezigbo obi ụtọ (na-abụghị ọgwụ ma buru ibu). Ekwetaghị m na m na-achọ iji dochie onye ọzọ. Echere m na ha abụọ dị oke mkpa ma baa uru. N'ezie, ekwenyere m na ndụ m 'n'ịntanetị' emeela ka m bụrụ onye nkwukọrịta ka mma na ndụ m. Ọ bụ ọgwụgwọ m ka m dee ma ọ na-atọ m ụtọ mgbe m nwetara nzaghachi na ederede m (ọbụlagodi na ọ dị njọ).
Nke bụ eziokwu bụ, ma ọ bụrụ na m na-enweghị nkwado na netwọk na m nwere na ị na-folks fol M eleghị anya nwere ike enweghị obi ụtọ ma nwee ike ịdaba na ịda mbà n'obi. O nwere ike ịbụ na m na-egwu egwuregwu vidio n’abalị ma na-eme ka ndị ọrụ ibe m nwee nsogbu n’oge ehihie.
Ọ ga-akara m mma ịnara ọgwụ m Web 2.0 kwa ụbọchị.
Tags: omumedara mbà n'obiịda mbà n'obiìgwè ehiakara ntịomume n'onlinentanetomume mgbasa ozi
Aug 21, 2007 na 10:11 PM
Na mbu, ekwenyeghị m na ntanetị nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya dị ka Twitter, blọọgụ na ndị dị otú ahụ nọ nso ebe ọgwụgwọ maka ihe ndị dị ka ịda mba na ekwenyeghị m na Mark na-atụgharị uche maka ihe na-akpata ịda mba.
Nke ahụ kwuru na agbanyeghị m kwenyere na n'ụzọ ụfọdụ nkwukọrịta anyị sitere na web na-enyere mmadụ aka inwe ugwu, echiche nke ịba ọgaranya na n'ọnọdụ ụfọdụ na-enyere mmadụ aka site n'oge ụfọdụ siri ike n'oge ndụ ya. M ga-eru nke ahụ n'agbanyeghị na anaghị m etinye blọọgụ n'otu ọkwa dị ka Twtitter na ndị dị otú ahụ (Aga m eme ihe na otu n'ime ụbọchị ndị a n'oge na-adịghị anya).
Dịka ọmụmaatụ dịka akụkụ nke WinExtra m nwekwara ọwa IRC nke na-akpọ oku ịkpọ oku (ọkachasị ma ọ bụrụ na m ma ndị folks na-eme IRC na mbụ) na otu ezigbo enyi m n'afọ gara aga ghọtara na ọ dị ya mkpa ịdị ndụ dị oke mkpa gbanwee ka ị riri ahụ. O nwere ihe ịga nke ọma - yana ọfụma dịka mmadụ nwere ike isi bụrụ onye ara riri ahụ - mana ọ gwara m otu ụbọchị na ọ bụrụ na ọ bụghị maka ọwa IRC na ndị nọ ebe ahụ ọ jiri obi eziokwu amaghị ma ọ gaara eme ya site na nke ahụ ezigbo ọchịchịrị.
N'okwu ọzọ nke mere naanị otu n'ime ndị na - eche ogologo oge na WinExtra forums na channelụ IRC kwụsịrị ịkwụsị ma ọ bụ igosi na ọwa. N'aka nke ya ndị otu abụọ nọ na US nwere nnukwu nchegbu ma malite usoro ịnwa ịgbaso ya iji mee ka ọ dị mma. Taa, ọ pụtara na mberede na ọwa ma ọ dị ka ezigbo enyi furu efu na-alọghachi n'ụlọ - ma ya ma anyị.
Nke a bụ obodo na ebe ọ naghị etinye aka na Web 2.0 ụwa nke netwọkụ mmekọrịta m ga-ewere ya na mpaghara Facebook ma ọ bụ Twitter ọ bụla oge ọ bụla. Yana m chere na ọ na-egosi na ọ bụrụ na ndị online nwere ogologo ndụ na omimi nke ndị enyi (nke ma ọ bụrụ na ị na-aghọta na anyị forums dị ka obere ka ha nwere ike ịbụ na e ruo afọ isii gbakwunyere afọ) ọ na-eme ka akụkụ nke ndụ mmadụ ka mma ma nye gị mmetụta nke ịbụ - nke bụ n'ezie ihe anyị niile dịka mmadụ chọrọ na ndụ anyị.
M dọrọ aka ná ntị na m nwere ike mutilated okwu Mark… dị ka m mere! Detuo ụfọdụ ederede banyere ịda mba na ekwupụtaghị na ndị a bụ nanị isi iyi nke ịda mba - ndị a bụ ụfọdụ di na nwunye. Ozizi nke Social Media na ọ bụ ohere iji nyere ịda mba aka abụghị nke Mark, ọ bụ nke m na-eche.
Akụkọ dị egwu banyere obodo gị ma ekwenyere m gị - nke bụ ihe onye ọ bụla chọrọ iji ahụike. Echere m na Social Media hapụrụ anyị ka anyị mepee 'nke' obodo ndị anyị na-agaraghị ekpughe ma ọ bụghị.
Daalụ maka ahụkebe kwuru!
Aug 22, 2007 na 3:37 PM
Ezigbo ozi, Doug! Achọpụtara m ịkparịta ụka mmekọrịta mmadụ na ibe m ụzọ iji soro ọnọdụ na ndụ nke ọtụtụ ndị m na-ewere dị ka ndị enyi, ụfọdụ n'ime ha ọbụna ezigbo ndị enyi, yana emetụta ndụ ndị ọzọ nke m na-agaghị enwe oge zuru ezu n'ụbọchị iji mee nke a. . Ọ bụrụ na m hụ enyi m nọ ná mkpa, enwere m ike ịbịakwute ngwa ngwa iji hụ ihe m nwere ike ime iji nyere ya aka. Enweela m ndị enyi (gụnyere gị!) Site na nkwukọrịta elektrọnik nke m nwere ike ọ gaghị ama nke ọma, nke mechakwara bụrụ ọbụbụenyi na-adịghị n'ịntanetị.
PS Agbaghara m ihe odide gị kwa ụbọchị ka ị na-arụ ọrụ gị na mgbanwe. Obi dị m ezigbo ụtọ ịhụ posts gị n'oge na-adịbeghị anya!
Aug 22, 2007 na 7:45 PM
Daalụ Julie! Ana m agbalị ịlaghachi n’ịdị mma ma ana m agbasi mgba ike. Ana m arụ ọrụ ogologo oge ma agbakwunyela mgbatị (were ya!) Na ngwakọta. Achọpụtabeghị m usoro ziri ezi ma - m mara mma ma ike gwụrụ.
Aga m aga ebe ahụ!
Nov 19, 2007 na 3:37 PM
Ekwenyere m kpam kpam na tiori na iji saịtị mgbasa ozi mmekọrịta bụ ihe dị mma ọgwụgwọ. Maka m, Achọpụtala m na ọ dị mma ma na-enye m ohere ide banyere mmetụta m. Ọ bụrụgodị na ọ dịghị onye na-agụ ha. Enwere ike ịde ya ede. M hụkwara saịtị dị ka Facebook na MySpace n'anya. Ha na-enye ndị mmadụ ohere ijikọ karịa ihe ha nwere ike ime ma ọ bụrụ na ha enweghị njikọ ahụ. Daalụ maka ikenye ozi a gbasara saịtị mgbasa ozi. Enwere m olile anya na ọtụtụ mmadụ ga-ahụ ihe ọma na ya.
Nov 19, 2007 na 3:59 PM
Anyị bụ anụmanụ na-elekọta mmadụ, anyị abụghị Jason? Ọ bụrụ na enweghị ụzọ anyị ga-esi na-emekọrịta ihe, enwere m obi ike na nke ahụ nwere ike iduga ọtụtụ ọgba aghara mmekọrịta na ọ nwere ike ịdaba na nsogbu ndị ọzọ.
Dị ka gị, achọpụtara m n'ezie dị ka nnukwu valve tọhapụ valvụ. Ọzọkwa, mgbe mmadụ kelere m ma ọ bụ tinye maka ihe m dere - nke ahụ na-eme ebube maka ịdị mma onwe onye!
Jul 23, 2008 na 3:18 PM
Echere m na enwere ike belata ihe mgbu site na ịda mbà n'obi n'ihi itinye aka na mmemme mgbasa ozi. Lee ọmụmụ ihe nke ndị na-eri na Second Life dịka ọmụmaatụ. Ha nwere ike ịmepụta avatars dabere na njirimara anụ ahụ ha chọrọ ma jikọọ na ndị mmadụ na ọkwa ha nwere ike ọ gaghị enwe ike tupu. Nke ahụ bụ naanị otu ihe atụ.
Anọ m onwe m gbara ama otu otu mgbasa ozi mmekọrịta nwere ike isi nyere aka. Anọ m na-enyocha mkparịta ụka mkparịta ụka nke MySpace iji nyochaa otú ndị mmadụ na-ata ahụhụ site na ịda mbà n'obi, nchegbu, bipolar, OCD, wdg na-adabere na obodo ndị a maka nkwado. Mgbe m na-elele mkparịta ụka ahụ, elere m ka otu onye na-ekwu maka imerụ onwe ya. Ndị obodo batara ozugbo ma nyere ya aka pụta. Ọ dị ka a ga - asị na obodo MySpace mere dị ka ndu ya.
Echere m na ebe mgbasa ozi mgbasa ozi na-aga, anyị ga-ahụkwu ọrụ ndị dịnụ maka niches. Ndị Ọrịa Dị Ka M (onye ahịa m gara aga nke m na-eme nyocha n'oge ahụ) na-ewetara ndị mmadụ na-arịa ụdị ịda mba dị iche iche ọnụ ka ha wee nwee ike ịkọ ahụmahụ ha ma jikọta ibe ha. Ọ bụ ngwa ọrụ dị ịtụnanya ma na-aga igosi gị otu netwọkụ mmekọrịta mmekọrịta dị ike na idebe ndị mmadụ ụkwụ na ala. Ihe dị mma bụ netwọkụ mmekọrịta dịka PLM naanị na-ahapụ ndị mmadụ na-ata ahụhụ site na ọnọdụ isonye na otu ahụ. Nke a na - abawanye oke òkè n'ihi na ha maara na ọ bụghị naanị ha.
Daalụ maka nnukwu post Doug!
Jul 23, 2008 na 4:41 PM
Scott - na-ekele nke ukwuu maka ụdị okwu na ahụkebe ikwu. Ọ bụ ihe dị egwu ịhụ na teknụzụ a ka ejiri ya rụọ ọrụ nke ọma Ndị Ọrịa Dị Ka M. Nnukwu njikọ nke m na-etinye na njikọ m kwa ụbọchị echi!
Aug 8, 2008 na 2:53 PM
Echere m na mgbasa ozi ọha na eze nwere ike inyere ndị mmadụ aka ịnagide ịda mbà n'obi, gịnị kpatara ya?
Ihe omuma m bu na onye obula, na ihe nile nke uwa nwere njikọ. Anyị niile sitere n'otu isi iyi nke ike, na ịda mbà n'obi bụ ihe sitere na mmetụta nke nkewapụ site na isi iyi a.
Eeh Amaara m na ọ na ada ụda ọhụrụ agey. Mana ọ bụ echiche dị mfe, ọ dịkwa m nghọta.
Echeghị m na mgbasa ozi mmekọrịta bụ ọgwụgwọ, mana ọ na-eme ka ndị mmadụ gbakọta, nke ahụ bụkwa ihe anyị niile na-achọsi ike na isi anyị.
Nwa ada m na-etinye oge ka ukwuu n'ịntanetị na saịtị a na-akpọ nexopia. O zutela ọtụtụ n'ime ndị enyi ya, na mpaghara na ebe ndị ọzọ na ebe nrụọrụ weebụ a. Ebe nrụọrụ mmekọrịta na-enyere anyị aka izute ndị nwere ọdịmma yiri nke a, ha bụ ngwa ọrụ iji mee ka anyị na ndị enyi ochie na ndị enyi ochie nwee mmekọrịta.
Anọwo m na-agụ "Ike nke ugbu a" site n'aka Eckhart Tolle. Akwụkwọ a na-enye nkọwa zuru ezu banyere ihe kpatara anyị ji ada mbà, nchegbu na ihe ndị ọzọ.
Ọ na-enye azịza nke "ibi ugbu a" dịka ọgwụgwọ. Ekwenyere m, na-akwụghachi akwụkwọ a maka onye ọ bụla nwere mmasị na nduzi philisophical maka obi ụtọ.